Josef na Meri Ekuru Nwa Ọhụrụ Bụ́ Jizọs Bịa n’Ụlọ Nsọ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
E BIRI JIZỌS ÚGWÙ, MECHAA KURU YA BỊA N’ỤLỌ NSỌ
Josef na Meri alaghachighị Nazaret ozugbo, ha nọtụrụ na Betlehem. Mgbe Jizọs nọrọ abalị asatọ, ha biri ya úgwù otú e kwuru n’Iwu Chineke nyere ụmụ Izrel. (Levitikọs 12:2, 3) Ọ bụkwa omenala na a ga-agụ nwa nwoke aha n’ụbọchị ahụ e biri ya úgwù. Ha gụrụ nwa ha Jizọs otú mmụọ ozi Gebriel gwara ha.
Ihe karịrị otu ọnwa agaala. Jizọs dịzi ụbọchị iri anọ ugbu a. Ebee ka ndị mụrụ ya ku ya na-aga ugbu a? Ha ku ya na-aga n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem, nke na-adịchaghị anya n’ebe ha bi. Iwu ahụ e nyere ụmụ Izrel kwuru na mgbe ụbọchị iri anọ a mụrụ nwa nwoke gachara, nne ya ga-eweta ihe a ga-eji chụọ àjà e ji eme ka mmadụ dị ọcha n’ụlọ nsọ.—Levitikọs 12:4-8.
Meri mere otú a. O wetara ụmụ nnụnụ abụọ. Ụmụ nnụnụ abụọ a o wetara gosiri na ya na Josef abaghị ọgaranya. Ihe Iwu ahụ kwuru gosiri na ihe e kwesịrị iweta bụ nwa ebule na nnụnụ. Ma, ọ bụrụ na aka nne ahụ erughị iweta otu ebule, o nweziri ike iweta nduru abụọ ma ọ bụ kpalakwukwu abụọ. Meri wetara nduru abụọ na kpalakwukwu abụọ n’ihi na ọ bụ ihe aka ya ruru.
“O RURU ỤBỌCHỊ A GA-EME KA HA DỊ ỌCHA”
Ọ na-abụ ụmụ nwaanyị Izrel mụọ nwa, a na-ewere ha ka ndị na-adịghị ọcha ruo oge ụfọdụ. Mgbe ọ nọzuru oge ahụ, a na-achụ àjà nsure ọkụ iji mee ka ọ dị ọcha. Ihe a na-echetara ha na e nweela onye na-ezughị okè, bụ́kwa onye mmehie, si n’ahụ́ ha pụta. Ma, nwa ọhụrụ a bụ́ Jizọs zuru okè ma dịkwa nsọ. (Luk 1:35) N’agbanyeghị nke ahụ, Josef na Meri “kuuru ya” gaa n’ụlọ nsọ iji ‘mee ka ha dị ọcha’ otú e kwuru n’Iwu.—Luk 2:22.
Mgbe Josef na Meri rutere n’ụlọ nsọ ahụ, otu agadi nwoke bịakwutere ha. Aha ya bụ Simiọn. Chineke ekpugheerela Simiọn na tupu ya anwụọ, ọ ga-ahụ Kraịst, ma ọ bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa. N’ụbọchị a Josef na Meri gara n’ụlọ nsọ, mmụọ nsọ mere ka Simiọn gaa n’ụlọ nsọ, bụ́ ebe ọ hụrụ Josef na Meri na nwa ọhụrụ ha. Simiọn kuuru nwa ahụ n’aka.
Mgbe o ku Jizọs, o kelere Chineke, sị: “Ugbu a, Ọkaakaa Onyenwe anyị, ị ga-ahapụ ohu gị ka ọ nwụọ n’udo dị ka i kwuru; n’ihi na anya m ahụwo onye ị ga-esi n’aka ya weta nzọpụta, bụ́ onye i wepụtara n’ihu mba niile. Onye a bụ ìhè nke ga-ewepụ ihe kpuchiri anya mba niile nakwa ebube nke ndị gị bụ́ Izrel.”—Luk 2:29-32.
Ọ tụrụ Josef na Meri n’anya mgbe ha nụrụ ihe a Simiọn kwuru. Simiọn gọzikwara ha ma gwa Meri na ‘e debere nwa ya a ka ọ bụrụ onye ga-akpata ọdịda na mbili nke ọtụtụ ndị n’Izrel.’ O kwukwara na Meri ga-enwe ezigbo mwute ga-adị ka è ji mma agha manye ya n’obi.—Luk 2:34.
E nwere onye ọzọ nọ n’ụlọ nsọ n’ụbọchị ahụ. Ọ bụ Ana, onye amụma nwaanyị dị afọ iri asatọ na anọ. Ọ naghị akọ ụkọ n’ụlọ nsọ. N’otu oge ahụkwa, ọ bịakwutere Josef na Meri na nwa ọhụrụ ha bụ́ Jizọs. Ana bidoro ikele Chineke, na-agwakwa ndị niile nọ ebe ahụ banyere Jizọs.
Cheedị ụdị obi ụtọ Josef na Meri nwere ka ha na-ahụ ihe a na-eme n’ụlọ nsọ. N’eziokwu, ihe a niile mere ka o dokwuo ha anya na nwa ha a bụ Onye ahụ Chineke Kwere ná Nkwa.
N’oge ụmụ Izrel, olee mgbe a na-agụ nwa nwoke a mụrụ ọhụrụ aha?
Olee ihe a na-achọ ka nwaanyị mụrụ nwa nwoke mee ma nwa ya ruo abalị iri anọ. Gịnịkwa ka ihe Meri na Josef wetara na-egosi gbasara otú aka ha hà?
Mgbe Meri na Josef kuuru Jizọs rute n’ụlọ nsọ, olee ndị matara onye Jizọs bụ? Oleekwa otú ha si gosi na ha matara ya?